I-Chelsea FC Yamanje Abadlali-Izindaba Zezingane & Untold Biography Facts
Ikhaya Amathegi I-Chelsea FC Current Players
Maka: I-Chelsea FC Yamanje Abadlali
Siyakwamukela ku-Archive yethu yamanje ye-Chelsea FC Current Players. Sikholelwa ukuthi wonke umuntu okhona e-Chelsea udlala ibanga lakhe egameni lakhe. Le nqolobane ibamba izindaba ezithandekayo, ezamangalisa nezithakazelisayo mayelana namanje abashayeli bebhola beCentral FC kusukela ezikhathini zabo zokuzalwa.
Ibhola lezingane ze-Footballer Plus Untold Biography Imininingwane izindaba! Yingakho sizinikezele ukuba sibe umthombo wakho we-digital wezindaba ezithandekayo kuwe.
Kulo khasi, okufakiwe okusha kuyengezwa kumlando wethu njalo. Ukubuyekezwa okwenziwe okufakiwe okushicilelwe kakade kunikeza ulwazi olusesikhathini. Thola ngezansi ingobo yomlando yabadlali be-Chelsea FC yanamuhla ngokujabula kwakho kokufunda.
Abahleli be-LifeBogger - Usuku olushintshiwe: Ephreli 15, 2020 1
I-LB iveza Indaba Egcwele Yomdlalo Webhola owaziwa ngegama lesidlaliso "Riq". Iqiniso lethu leTariq Lamptey Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela ...
Abahleli be-LifeBogger - Usuku olushintshiwe: Disemba 1, 2019 0
I-LB iveza iNdaba Egcwele Yomlingiswa webhola lesidlaliso esidlalayo "I-New Modric". Indaba yethu kaBilly Gilmour Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso aletha ...
I-LB iveza Indaba Egcwele Yomdlalo Webhola owaziwa kakhulu ngegama lesidlaliso "Fik". Iqiniso lethu leFikayo Tomori Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ...
I-LB iveza Indaba Egcwele Yomdlalo Webhola owaziwa kakhulu ngegama elithi "Reece". Indaba yethu yeReece James ebuntwaneni kanye ne-Untold Biography Amaqiniso aletha ...
I-LB iveza iNdaba Egcwele yomdlali webhola ongumqeqeshi waseFrance onesidlaliso esithi "LaZoumance". Indaba yethu yeKurt Zouma Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso aletha ...
I-LB iveza Indaba Egcwele Yomdlalo Webhola owaziwa ngegama elithi "Mount" Our Mason Mount Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela ...
Indaba yethu yeHakim Ziyech Biography Amaqiniso anikeza ukubalwa ngokuphelele kwendaba yakhe yobuntwana, impilo yokuqala, abazali, impilo yomndeni, inkosazana / umfazi, impilo yomuntu kanye nendlela yokuphila. Ku ...
I-LB ibonisa iNdaba ephelele yeBhola Genius eyaziwa kakhulu ngegama lesidlaliso esithi "The Next David Luiz". Ethan Ampadu Childhood yethu ...
I-LB inikeza iNdaba Ephelele Yebhola le-Whiz Kid eliyaziwa kakhulu ngegama elithi "Callum". I-Callum yethu ye-Callum Hudson-Odoi Ingane yezingane kanye nokunye ...
I-LB inikeza iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesidlaliso esithi "Batsman". Indaba yethu ye-Michy Batshuayi Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ...